Waxaad wax xun dareemi kartaa dhacdo cabsi leh kadib - PTSD - 1177 Vårdguiden
PTSD - somaliska
Waxaad wax xun dareemi kartaa dhacdo cabsi leh kadib - PTSD
Waxaad wax xun dareemi kartaa muddo dheer haddii aad soo martey dhacdo cabsi leh. Tusaale ahaan, waxa kugu adkaan karta inaad seexato, jidhka oo ku xanuuna ama inaad marmarka qaarkood aad u cabsato. Markaa ayaad daryeel caafimaad dalban kartaa. Waxa jira daaweyn kaa caawinaysa.
Waxa caadi ah in aad wax xun dareento dhacdo naxdin leh kadib. Halkan waxa ku yaala dhowr tusaale:
Waxa laguu geystey hanjabaad, jidhdil ama dagaal.
Waxaad aragtey iyadoo dad kale loo geysanaayo hanjabaad, jidhdil ama dagaal.
Waxaad si lama filaan ah u lumisay saaxiib dhow ama qof qoyska ka mid ah.
Waxaad soo martey dagaal, musiibo dabiici ah ama shil.
Waxa laga yaabaa inaad wax xun dareentid ka dib markaas aad soo marto dhacdo ku cabsi galisa, inkastoo ayna ahayn mid qof kale sidaas si la mid ah u cabsi galisay. Waxaad bilaabi kartaa inaad wax xun dareentid isla markaaba dhacdada kadib, ama muddo dheer ka dib.
Sidan oo kale ayaad dareemi kartaa dhacdo cabsi leh kadib
Waxa kugu adag inaad seexato iyadoo aad riyooyin xunxun ku riyooneyso.
Waxaad inta badan ka fikirtaa waxa xun ee dhacay. Waxa la dareemi kartaa inay dhab tahay.
Waxaad badanaa dareemeysaa murugo ama cadho.
Waxaad helaysaa dareen xoogan oo cabsi ah oo jidhka oo dhan laga dareemo, kaas oo si lama filaan ahna u yimaada.
Waxa kugu adag inaad ahmiyada wax saarto.
Waxaad dareemeysaa culeys ama xanuun jidhka ah.
Waxaad iska ilaalineysaa waxyaabo ama xaalado ku xasuusinaaya wixii dhacay.
Waxaad iska ilaalineysaa dadka kale, marmarka qaarkood xataa dadka qoyskaaga ah.
Waxaad dareemi kartaa inaan waxna kaa farxin ama inaan waxna muhiim ah.
Xanuunka Walaaca riiqda Shooga iyo PTSD
Waa wax caadi ah in wax xun la dareemo dhacdo cabsi leh ka dib. Badanaa iyada ayaa kaligeed iska tagta. Haddii aad sii wado inaad si xun u dareento, waxaa laga yaabaa inuu kugu dhacay xanuunka PTSD. Waa soo gaabinta af Ingriisiga ah ee post traumatic stress disorder.
Waxa lagu siin karaa caawimo ku wajahan PTSD. Waxa jira noocyo kala duduwan oo daaweyn ah. Badanaa waxaad marar badan la hadli doontaa qof ka socda xirfadleyda daryeelka kuwaas oo caawiya dadka xunuun dareemaaya. Waxaad sidoo kale heli kartaa daawo.
Goorma iyo halkee ayaad ka raadsanaysaa daryeel caafimaad?
Raadso daryeel caafimaad haddii aad wax xun dareemeyso dhacdo cabsi leh kadib Waxaad la xiriiri kartaa mid ka mid ah kuwan qaabilaada ee soo socda::
ungdomsmottagning (xarun qaabilaada dhalinyarada)
xarun qaabilaada oo furan habeenkii iyo maalmaha fasaxyada
xarunta qaabilaada xanuunada dhimirka
Wac lambarka 1177 haddii aad rabto in lagaa caawiyo halka aad daryeel caafimaad ka raadsaneyso. Cidda ka jawaabeysaa waa kalkaalisooyin. Waxaad ku hadli kartaa Iswiidhish ama Ingriisi.
Wac 112 ama daryeel toos uga raadso xarun qaabilaada degdega ah, haddii aad xoog u xanuunsaneyso, ama aad ka fikireyso inaadan rabin inaad sii noolaato.
Waxaad xaq u leedahay inaad daryeelka caafimaadka amaan ku ahaato
Dhammaan shaqaaluhu waxay ballanqaadeen in aanay qof kale oo ka baxsan daryeelka caafimaadka u sheegin wax kasta oo aad u sheegto. Tani macnaheedu waa in shaqaaluhu ayna wax adiga kugu saabsan u sheegi karin qof ka baxsan daryeelka caafimaadka. Waxaad xaq u yeelan kartaa turjumaan haddii aanad ku hadlin Iswiidhishka. Turjumaanka laftiisa waxa qabanaaya xeerka sir haynta.
Waxaad sii kaxeysan kartaa qof saaxiib ah ama qof qoyskaaga ka mid ah haddii aad rabto. Dadka qoyska iyo asxaabta ee kuu turjumaaya ma aha turjubaano oo ma qabanaayo xeerka sir hayntu.
Maxaan sameyn karaa anigu si aan uga roonaado?
Waxa fiican in qof lagala hadlo sida aad dareemeyso. Waxay noqon kartaa qof aad garanayso ama qof jooga daryeelka caafimaadka. Waxaad sidoo kale wax ka qori kartaa wixii dhacay iyo sida aad dareemeyso. Waxay kaa caawin kartaa inaad si ka fiican dareento.
Halkan waxa ku yaala waxyaabo kale oo ku caawin kara:
Dibada u bax oo jidhka soo dhaqdhaqaaji. Tusaale ahaan waad soo luglugeyn kartaa.
Isku day inaad maalin kasta seexato oo aad wax cunto isla wakhti.
Iska ilaali khamrada ama daroogooyinka. Marka hore ayaa waxa la dareemi karaa inay ku caawineyso, laakiin markaa kadib ayaad dareemeysaa si ka sii xun.